Building Construction and Infrastructure: Water Cooled Chiller Plant Efficiency and Singapore Green Mark Program
Water Cooled Chiller Plant Efficiency and Singapore Green Mark Program
- Writing In Progress -
စကာင်္ပူ နိုင်ငံ လို ပူနွေးစွတ်စိုတဲ့ ရာသီဥတု ရှိတဲ့ ဒေသမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး Air Conditioning Systems တွေ လိုအပ်တာမို့ Chiller Plant တွေ ကို အဆောက်အအုံ တော်တော်များများ မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Chiller Plant တွေက Energy အသုံးများတာမို့ လည်ပတ်စရိတ် သက်သာစေဘို့ (တစ်နည်းအားဖြင့် စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် ကို ထိန်းသိမ်း နိုင်ဘို့ အတွက်) Energy Efficiency က အရေးပါပါတယ်။
စကာင်္ပူ နိုင်ငံ မှာ ရှိတဲ့ အဆောက်အအုံ သစ်တိုင်း Energy Efficient ဖြစ်စေဘို့ အတွက် Green Mark Program ကို လိုက်နာဘို့ လိုအပ် ပါတယ်။ အနည်းဆုံး အဆင့်က GM Certified ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်စိတ်တိုင်းကျ ပိုပြီး Energy Efficient & Environmental Friendly ဖြစ်အောင် လုပ်လို က လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ Green Mark Certification Program အရ လိုအပ်ချက်တွေ ဖြစ်တဲ့ Chiller Plant Efficiency ရဘို့နဲ့ Energy Saving တွေ ရဘို့ အတွက် Chiller Plant Efficiency တွက်နည်းတွေ နဲ့ Efficiency ပိုကောင်းအောင် လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ သိဘို့ က အရေးပါလာပါတယ်။
အခုတစ်ပါတ် Post မှာ တော့ Green Mark အတွက်သာ မဟုတ်ပဲ Chiller Plant Efficiency ကိုပိုကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ ဆိုတာ ကိုပါ လက်လှမ်းမီသလောက် တင်ပြပေးထားပါတယ်။
Requirements under Green Mark for New Buildings v.4.0: 2010
Minimum Energy Efficiency Requirements for Equipments
Basic Calculation Procedure and Understanding Work Example Calculations
Ways to Improve to achieve better Operation Efficiencies and Performances
လက်ရှိအခြေအနေ BCA Certification Standard for New Building (GM version 4.0: 2000) အရ Water-Cooled Chilled-Water Plant အတွက် လိုအပ်ချက်တွေ ကတော့
Green Mark Rating Peak Building Cooling Load (RT)
< 500 ≥ 500
Efficiency ( kW/RT)
Certified 0.80 0.70
Gold 0.80 0.70
GoldPlus 0.70 0.65
Platinum 0.70 0.65
အကယ်လို့ GoldPlus (သို့) Platinum လိုချင်တယ် ဆိုရင် အနည်းဆုံး ရရှိရမဲ့ Energy Saving နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လိုအပ်ချက်ကတော့
Green Mark GoldPlus - At Least 25% energy saving
Green Mark Platinum - At Least 30% energy saving
Chiller Plant Efficiency ကို အခြေခံ အားဖြင့် kW/RT နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ Cooling Capacity 1 RT ရဘို့ အတွက် သုံးရမဲ့ Electricity kW ဘယ်လောက်သုံးရတယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ kW နည်းရင် သုံးရမဲ့ Electricity နည်းတာမို့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီအတွက် ဘယ်လောက် ပိုပြီး ငွေအကုန်အကျ ခံထားရမလဲ (ပိုရင်းနှီးထားရမလဲ) ဆိုတဲ့ အချက်က လည်း အရေးပါပါတယ်။
Water-Cooled Chiller Plant တစ်ခု အတွက် Energy Efficiency တွက်တဲ့ အခါ ပါဝင်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ ကတော့
ဒီ Equipment လေးမျိုး အတွက် တစ်မျိုးစီ ရဲ့ kW/RT ကို တွက်ထုတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို မတွက်သေးခင် ARI 550 မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ Standard Condition မှာ ရှိတဲ့ Water Flowrate တွေ ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။
Condenser Water Flowrate :3gpm/RT (0.18925 l/s.RT) at 29.4 °C Entering Temperature
Evaporator Water (Chilled Water) Flowrate: 2.4 gpm/RT ( 0.1514 l/s.RT) at ΔT=5.6 °C
သတိပြုရမှာ က Water Flowrate တွေ ဟာ ΔT နဲ့ ပြောင်းပြန် အချိုးကျတယ် ဆိုတာပါ။ Ref: http://www.ahrinet.org/App_Content/ahri/files/standards%20pdfs/AHRI%20standards%20pdfs/AHRI%20550-590_2003.pdf
ဒါဆိုရင် GM Ver 4.0:2010, pg-101 မှာရှိတဲ့ Method A: Calculation နဲ့တွဲပြီး ဆက်လက် လေ့လာ နားလည်လို့ ရပါပြီ။
... Back to Top (Contents)....
ပထမ သိသင့်တာ ကတော့ Singapore Regulation (Codes) အရ အနည်းဆုံး ရရှိရမဲ့ Efficiency တွေကိုပါ။ ဒီနေရာ မှာ Water-Cooled Chilled-Water Plant at Reference Standard Condition ပေါ်မူတည်ပြီး Code Compliance အတွက် Minimum Efficiency ကိုတွက်ထုတ် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာ မှာ ဒီနေရာမှာ GM Ver 4.0:2010, pg-101 မှာရှိတဲ့ Method A: Calculation က Plant Configuration အတွက် တွက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Minimum Efficiency required for Chillers
Ref: SS530:2006. pg 14: for Chiller ≥ 1055kW : COP > 6.1
3.517 kW/RT ÷ 6.1 kW/kW (COP) = 0.577 kW/RT
Therefore: Minimum Chiller Efficiency ≤ 0.58 kW/RT
Minimum Efficiency required for Chilled Water Pumps
Ref: SS553: 2009: pg.22: For chilled water system 349 kW/m³/s
Water Flowrate: 0.1514 l/s.RT (at ARI 550: Standard Condition)
0.1514 l/s.RT × 349 kW/m³/s × 1 / 1,000 m³/l = 0.053 kW/RT
Therefore: Minimum Chilled Water Pumps Efficiency < 0.053 kW/RT
Minimum Efficiency required for Condenser Water Pumps
Ref: SS553: 2009: pg.22: For condenser water system 301 kW/m³/s
Water Flowrate: 0.18925 l/s.RT (at ARI 550: Standard Condition)
0.18925 l/s.RT × 301 kW/m³/s × 1 / 1,000 m³/l = 0.057 kW/RT
Therefore: Minimum Condenser Water Pumps Efficiency < 0.057 kW/RT
Minimum Efficiency required for Cooling Towers
Ref: SS530:2006. pg 15: for Propeller or Axial Fan Cooling Tower ≥ 3.23 l/s.kW
Water Flowrate: 0.18925 l/s.RT (Same as Condenser Water Pumps)
0.18925 l/s.RT ÷ 3.23 l/s.kW = 0.059 kW/RT
Therefore: Minimum Cooling Tower Efficiency < 0.059 kW/RT
အထက်က တွက်ခဲ့တဲ့ Minimum Efficiency တွေ က Equipment တစ်မျိုးစီ အတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး စုတဲ့ အခါမှာ တော့ ဒါတွေ ကိုပေါင်းလို့ ရတဲ့ 0.75 kW/RT ( 0.58+0.053+0.057+0.059 ) အစား အနည်းဆုံး GM Certified အတွက် 0.7 kW/RT ရကိုရရမယ် လို့ သတ်မှတ်ထားတာပါ။
အရင် တုန်းက CP13 နဲ့ SS530 လိုအပ်ချက်တွေ အရ ဆိုရင်တော့
- xxxx -
ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ Chiller ရဲ့ Full Load Efficiency ကို Manufacturer's Catalogue / Technical Data ကနေ ဖတ်ယူရပါမယ်။ ARI 550 Standard Condition ဖြစ်ဘို့ သတိထားပါ။
Chilled Water Pumps Efficiency
Primary Chilled Water Pumps တွေ ကိုပဲ စဉ်းစားဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Water Flowrate : အပေါ်မှာ တွက်ပြထားတဲ့ Flowrate ကိုပဲ အခြေခံပါတယ်။
Pump Head Chiller Plant ရဲ့ Piping Configuration ပေါ်မူတည်ပြီး တွက်ယူရပါမယ်။ စဉ်းစားဘို့ လိုအပ်တာကတော့ Pressure Loss at Chiller + Pipe Friction Loss + Pipe Fitting Loss
Pump Efficiency : ကိုယ်ရွေးမဲ့ Pump အတွက် Manufacturer's Catalogue ကနေ ဖတ်ယူရပါမယ်။ Duty Point က Pump Curve အောက် သိပ်မရောက်လွန်းစေဘို့ သတိပြုပါ။
Motor Efficiency ကိုယ်ရွေးမဲ့ Motor အတွက် Manufacturer's Catalogue ကနေ ဖတ်ယူရပါမယ်။
ပြီးရင် အောက်က Pump Power Formula ကို သုံးပြီး Pump Power Usage ကို တွက်ယူနိုင်ပါတယ်။
Q = Water Flowrate (l/s )
h = Pump Head (m )
ηp = Pump Efficiency
ηm = Motor Efficiency
သူ့ရဲ့ မူရင်း က တော့
ဒီနေရာမှာ VSD ရဲ့ Efficiency ကို ထည့်မတွက်သေးတာ တွေ့ရပါတယ်။
Condenser Water Pumps Efficiency
Water Flowrate : အပေါ်မှာ တွက်ပြထားတဲ့ Condenser Water Flowrate ကိုပဲ အခြေခံပါတယ်။
Pump Head Chiller Plant ရဲ့ Piping Configuration ပေါ်မူတည်ပြီး တွက်ယူရပါမယ်။ စဉ်းစားဘို့ လိုအပ်တာကတော့ Pressure Loss at Chiller + Pipe Friction Loss + Pipe Fitting Loss + Height Difference between Cooling Tower Return Inlet and Basin
Pump Efficiency နဲ့ : ကိုယ်ရွေးမဲ့ Pump အတွက် Manufacturer's Catalogue ကနေ ဖတ်ယူရပါမယ်။ Duty Point က Pump Curve အောက် သိပ်မရောက်လွန်းစေဘို့ သတိပြုပါ။
တွက်နည်းကတော့ Chilled Water Pumps တွက်တုန်းက သုံးတဲ့ Formula ကို ပဲ ပြန်သုံးရပါတယ်။
Cooling Towers Efficiency
ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ Cooling Tower ကနေ လိုအပ်တဲ့ Condenser Water Flowrate ကို မူတည်ပြီး Manufacturer's Catalogue / Technical Data ကနေ ဖတ်ယူရပါမယ်။ ဒီလိုဖတ်တဲ့ အခါ SS530:2006 / CTI ATC-105 အရ လိုအပ်တဲ့ 35°C Entering Water, 29°C Leaving Water And 24°C wb Outdoor Air မှာ ဖြစ်နေဘို့ သတိထားပါ။
အပေါ်က အခြေခံ တွက်ချက်မှု တွေ ကိုနားလည်ပြီ ဆိုရင် ပေးထားတဲ့ Work Example ပေါ်မှီငြမ်းပြီး Chilled-Water Plant Efficiency ကို တွက်ချက် ရယူနိုင်ပါပြီ။
---- DRAFT ------ ... Back to Top (Contents)....
Sizing the Chiller Plant Right
Full Load အတွက်သာ မက Part Load အတွက်ပါ သင့်တော်တဲ့ Chiller Plant အရွယ် နဲ့ အရေအတွက် ကို ရွေးချယ်ရပါမယ်။ လိုအပ်တဲ့ Chillers တွေ ကိုလည်း ဒီ အခြေအနေ နှစ်ခု စလုံးအတွက် သင့်တော်အောင် ရွေးချယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Selecting High Efficiency Equipments, Know Their Nature and Reserve Space for Them
Select High efficiency Chillers.
Optimize Size and Quantity Combination. Chillers of different capacities have different efficiencies, optimize them.
Optimize the refrigerant choice: Choose Higher Efficiency Refrigerant if favorable
Consider and check for Part Load efficiency
Watch out for Life Cycle Cost and Initial Investment Cost
Chiller Efficiency Improve with;
Lower Condenser Water Entering Temperature
Higher Chilled Water Supply Temperature
Higher Chilled Water Return Temperature
Higher Chilled-Water ΔT (Temperature Difference)
Check the efficiency changes for Different Chilled Water Supply/Return Temperature and Entering Condenser Water Temperature Humidity vs High Chilled Water Supply Temperature High dT vs FCU, Air Side
Select the optimum pump size and Use VSD when required to vary the flowrate
Select high efficiency pumps and motors
Common Header Pumping (or) One-to-One Pumping
Primary Only? Or Primary + Secondary
Check for Optimum Efficiency
Get Space for Cooling Tower Performance, prevent hot-moist air short circuit. May utilize VSD however if Chiller Efficiency improve better with Lower Condenser Water Temperature Choose Constant Speed.
Over-sizing Cooling Toweralittle bit will savealot.
Bad Cooling Tower Performance : It will drag the whole chiller plant down.
Don't let Architects give less space than required for cooling tower, don't let them cover or enclose it with decoration. (Major Mistake)
Cooling Tower ဘေးမှာ နေရာတွေ အများကြီး လွတ်နေတယ် လို့ ထင်တယ်။ Cooling Tower က အရုပ်ဆိုးတယ် လို့ထင်တယ်။ Trellis တွေ၊ Louver တွေ နဲ့ ကာတယ်။ အသံလုံအောင် ဆိုပြီး နံရံတွေ နဲ့ ကပ်ပစ်တယ်။
VSD: Is it Better (or) Not ?
VSD good for Close Loop Pumps with Little or No Static Head
VSD Good for Fans
Power Varies proportional to the Cube of Flowrate
However, Lowering Condenser Water Temperature may offset the fan power
Condenser Water Temperature and VSD
Condenser Water Pump and VSD
Arranging the equipments and Piping to improve efficiency
Cooling Tower closer to Chillers (However, Cooling Tower Should not be below the Chiller to prevent System drain to Cooling Tower)
Provide sufficient space for Cooling Tower. Don't let Architects give less space than required for cooling tower, don't let them cover or enclose it with decoration. (Major Mistake)
Size the Pipes to Lower Friction Loss (reduce Flow Velocity, Note: It will not Lower equipment Friction Losses)
Use the fittings with Lower Head Loss
Use minimum bends (elbows means head loss)
Optimizing System Design and Operating Parameters
Optimizing chilled water supply temperature and increasing delta T
Improve Condenser Water Temperature
Use redundant Cooling Tower to Improve Approach (or) Condenser Water Temperature
Increasing pipe sizes to decrease pump heads (Note: It will not Lower equipment Friction Losses)
Simulation with weather profile, instead of extreme design condition
There will be Cost and other system performance impacts associated with any changes in design parameters.
Posted by Ko Chaw - ကိုချော at 2:10 AM Labels: Environment, HVAC
CAD & Design Tools
Singapore: M&E and AutoCAD
M&E Systems vs Buildings
M&E Systems ဆိုတာ ဘာတွေလဲ။
Scope of M&E Systems
M&E: နေရာ လျာထားသတ်မှတ်ခြင်း
M&E နဲ့ Architectural ဒီဇိုင်း
M&E နဲ့ ကုန်ကျစရိတ်
M&E Design: High-Rise Buildings
Testing & Commissioning Process
HVAC: Introduction to Design
HVAC: Building in Hot & Humid Climate
M&E Basics: Pipe & Duct Sizing
HVAC: Duct Sizing with VBA
HVAC: Duct Sizing
HVAC Control (01) : FCU
Sanitary Plumbing: Introduction
Domestic Water Supply: Introduction
Water Tanks ( ရေကန် များ )
Swimming Pools (ရေကူးကန် များ)
Fire Protection : Introduction
Smoke Control: Pressurization Systems
Fire Sprinkler (Wet) System, S'pore
မြန်မာပြည် မြို့တော် ဈေးများ နဲ့ မီး ဘေးကာကွယ်ရေး။
Fire Protection စကားဦး (နိဒါန်း)
Fire Protection (အပိုင်းတစ်)
မြို့တော် စည်ပင်သာယာ အဆင့်အတန်း နှင့် မီးအာမခံ။
Sustainable, Green and Environment
Green Buildings: USGBC's LEED/
Clean Air: လေကောင်းလေသန့်
Clean Water: ရေကောင်းရေသန့်
USA: EIT and FE Exam
mail me: ko_chaw@yahoo.com
MEP Design (7)
MEP Systems (13)
Testing and Commissioning (1)
Construction Industry မှာ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကျော် အတွင်း ရရှိခဲ့ တဲ့ အတွေ့အကြုံ အချို့ နဲ့ လက်ရှိ နည်းပညာ အခြေခံ တွေ ကို
မျိုးဆက်သစ်တွေ ဆီ လက်ဆင့်ကမ်းပေး နိုင်ဘို့ နဲ့ မိတ်ဆက်ပေး နိုင်ဘို့ အတွက် ပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Blog မှာ အချက်အလက် တွေ ကို အတတ်နိုင်ဆုံး တိကျအောင် ဖော်ပြထား ပေမဲ့ အမှားတွေ ပါနိုင်ပါတယ်။
အသုံးချ နိုင်ဘို့ကတော့ ကိုယ်တိုင် လေ့လာ၊ ဆန်းစစ် သေသေချာချာ နားလည်ပြီး တာဝန်ယူနိုင်မှ လုပ်ပါ လို့ တိုက်တွန်း လိုပါတယ်။
အမှားတွေ့ရင် လည်း ပြင်ဆင်ခွင့် ရအောင် ko_chaw@yahoo.com ကို အသိပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။